China Dibenzoylmethane Ukukhiqiza neFektri | IShuiyuan New Energy Technology
Amakhemikhali ayisisekelo we-Organic
Izakhiwo Zamakhemikhali zeDibenzoylmethane
75-79 ° C (kuvuliwe.)
219-221 ° C18 mm Hg (kukhanyisiwe.)
8.95 ± 0.10 (Okubikezelwe)
I-Soluble in ether, chloroform, ne-aqueous sodium hydroxide. Ayinamanzi emanzini.
Isitebele. Akuhambisani nama-oxidizing agents aqinile.
Ukusetshenziswa Kwe-Dibenzoylmethane Ne-synthesis
Izakhiwo Zamakhemikhali: impuphu emhlophe ngokuphuzi
Ukusetshenziswa: i-dibenzoylmethane njengesiqinisi sokushisa esisha se-PVC, ukudluliswa okuphezulu, okungenabuthi futhi okungenambitheki; ingathuthukisa kakhulu umbala wokuqala we-PVC, ukwenza izinto obala, ukuzinza kwesikhathi eside, nokucubungula ngesikhathi semvula kanye ne- "zinc burn" njalonjalo; esetshenziswa kakhulu kwezokwelapha, ukupakisha kokudla kanye neminye imikhiqizo engeyona enobuthi ebonakalayo ye-PVC. I-Dibenzoylmethane engenhla ingangena ekukhanyeni kwe-290nm ultraviolet, ngenkathi ukukhanya okunomphumela wokuzinza kumikhiqizo ye-PVC kunganikeza ukusebenza okuzinzile kwesikhathi eside.
Incazelo: I-CHEBI: I-beta-diketone eyi-acetylacetone (i-acac) lapho womabili amaqembu e-methyl athathelwe indawo ngamaqembu e-phenyl. Kuyingxenye encane yomsuka we-licorice (Glycyrrhiza glabra) futhi kukhombisa imiphumela ye-antimutagenic kanye ne-antica cer.
Iphrofayili Yezokuphepha: Inobuthi ngokulingene ngokufaka. Lapho ishubisa ukubola ikhipha intuthu ene-acrid nemiphunga ecasulayo
Izindlela Zokuhlanzwa: I-Dibenzoylmethane (1,3-diphenyl-1,3-propanedione) [120-46-7] M 224.3, m 8 0o. I-crystallize dibenzoylmethane evela ku-pet ether noma i-MeOH. [Beilstein 7 IV 2512.]
Isiqinisi esisha sokushisa esisizayo esingesona ubuthi se-calcium, i-zinc nomhlaba ongajwayelekile ——I-Dibenzoylmethane (i-DIBENZOYL METHANE) Inkomba yekhwalithi eyinhloko: Ukubukeka: Okumhlophe, okukhanyayo okwe-powder ophuzi okristalline Okuqukethwe: ≥99% Iphuzu lokuncibilika: 76 ~ 80 ℃ Ukomisa ukulahleka: ≤ 0.5% Okuqukethwe komlotha: ≤0.1% Ukupakisha: 25kg, 50kg Stearoyl benzoyl methane imikhiqizo: I-PVC entsha engeyona enobuthi yokuqinisa ukushisa, ingasetshenziswa ne-calcium / zinc, i-barium / zinc nezinto zomhlaba ezingavamile, ezivivinywa yiNational Research Center futhi kwafakazelwa ukuthi ikhwalithi yemikhiqizo ihlangabezana ngokugcwele nezindinganiso zekhwalithi yemikhiqizo efanayo yangaphandle. Inkampani yethu ingenye yomkhiqizi omkhulu we-Dibenzoylmethane futhi imikhiqizo yethu ithengiswa kakhulu e-Europe, American, Taiwan eTshayina, Japan, South Korea, Russia, India,
IMexico, njll futhi sinamakhasimende emazweni angaphezu kwama-40. Lo mkhiqizo u-powder omhlophe noma okhanyayo ophuzi ophuzi, oncibilika kalula ku-ether, trichloromethane, o-Xylene, toluene ne-aqueous sodium hydroxide, encibilika kancane ku-ethanol, encibilika kancane kakhulu emanzini. Njengohlobo olusha lwe-PVC yokusiza ukushisa okuzinzileyo, ukudluliswa kwayo kuphezulu, akunabuthi futhi akunambitheki; Ingasetshenziswa nge-calcium / zinc eqinile noma ewuketshezi, i-barium / zinc nokunye okusimamisa ukushisa, ingathuthukisa kakhulu umbala wokuqala we-PVC, ukwenza izinto obala, nokuzinza kwesikhathi eside, kanye nemvula ne-'inc fever 'lapho icubungula; isici sayo ingabe inomphumela omuhle kakhulu wokusebenzisana 'ne-zinc insipho', ukwengezwa kwalo mkhiqizo kungavimbela ngempumelelo 'ukushiswa kwe-zinc', efanelekile ukusebenzisa insimu eqinile, engeyona enobuthi, enganambitheki, ukukhuthaza ukwenziwa ngcono kwe-Calcium / Zinc stabilizer, isetshenziswa kakhulu kwezokwelapha, ukupakisha kokudla kanye neminye imikhiqizo ye-PVC esobala (njengamabhodlela e-PVC, amashidi, ifilimu esobala njll.). I-Dibenzoylmethane ingangena ngaphezu kwe-290nm UV, ngasikhathi sinye inomsebenzi wokuqina kokukhanya, inganikeza ukuzinza kwesikhathi eside kumikhiqizo ye-PVC.
Olandelayo: 1,3-IDiphenylpropane-1,3-dione 99%